Iri bhatani nyowani reKumba reiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Anenge maawa makumi maviri nemana mushure mekunge Apple yatanga neayo yazvino echinyakare Keynote mharidzo ye iPhone nyowani, isu tichiri hungover nenhau dzese dzavakatipa nezuro. Imwe yeaya angangove asina kukwezva kutariswa ndeye ek Home bhatani iyo inosanganisira iyo iPhone 7. Zvizhinji zvaive zvataurwa nezvazvo, kuti zvinogona kunyangarika, kuti zvaizosanganisirwa pachiratidziri ... asi chokwadi ndechekuti bhatani reKumba richiri kurarama zvakanyanya sezvazvaive, asi hongu, nenhau
Phil Schiller ndiye aive achitarisira kutiratidza kuti bhatani idzva reMusha richava sei. Bhatani rakaratidza mikana yarinopa kunyangwe ichitaridzika sechimwe chinhu cheiyo iPhone uye inogona kuenda isingazivikanwe, asi chokwadi ndechekuti kukosha kweiyi denderedzwa uye yatove bhatani bhatani rakakura kana uchitaurirana ne iPhone kana iPad.
Bhatani repamba reiyo iPhone 7 haichazovi bhatani repanyama sezvataona kusvika zvino. Uchave Nesimba Kubata, ndiko kuti, ichave inomanikidza uye cYakasanganiswa neiyo nyowani taptic injini Apple saka patinodzvanya bhatani tinonzwa kudedera uye chichava chinwiwa chakafanana neicho chekutsikirira chero bhatani (kana bhatani rekare reKumba).
Zvichida iri bhatani ichave isina kusimba sezvo iine zvikamu zvishoma zvepanyama, saka, zvinotarisirwa kuti vanhu vashoma vanotambura kukuvara kwavo Kumba bhatani sepakutanga uye havafanirwe kudhonza iyo Inobatsira Kubata. Zvakare pamwe iri bhatani nyowani rine chekuita nekushomeka kwemvura kune iyo iPhone 7 ikozvino, zvikamu zvishoma zvepanyama, zvishoma zvichave zvakafanira kusimbisa kuitira kuti iwo madonhwe ayo aanoshora asapfuure (rangarira kuti kwete kunyudza).
Apple yatove kuyedza tekinoroji iyi muTrackpads yeMacs uye Apple Watch, pamusoro pekufemerwa neshanduko iyo iPod yakatamburawo nemabhatani ayo ekutanga kuve multitouch sekutaura kwaSchiller nezuro muKeynote.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iri bhatani idzva reKumba reiyo iPhone 7
Kana zvisiri zvekunyudza, pikicha yeshoko rinowira mudziva? Aya haasi madonhwe mashoma
Roberto Sanchez akadaro
Chii chisinganyudza? Zvakanaka, iyo IP67 certification inotaura neimwe nzira 1 mita kudzika uye 30 min
Pindura kuna Roberto Sánchez
Ndicho chinhu chinonakidza kwazvo, hachisi chaicho chisina mvura. Muchokwadi, iyo garandi zviri pachena haina hanya nekuparara kwemvura. Iyi ine tsananguro yakapusa mumaonero angu. Pane nzira mbiri dzekugadzira mudziyo wemagetsi kunyudza. Izvo zvakanaka icho chisimbiso chakanaka mukuvaka uye izvi zvinogara nekusingaperi, kana kushandiswa kwekupfupisa kwenguva pfupi (mvura kune mafoni asina mvura yatengeswa pamhepo kwenguva yakareba). Izvi zvinogona kutsanangura kuti nei Apple ichiti chinhu ichi chinogona kutsakatika nekufamba kwenguva. Asi kwandiri kuti ndisimbiswe, chingave chinonyengera chikuru kuvanhu ..
Ini ndinofunga havataure kuti inonyudza nekuti ndiyo nzira yavanoshambidza maoko avo kana ikakuvara nekupinda mumvura. Iyo IP67 certification inotaura chinhu chimwe, asi muSAT haugone kuziva kana foni yanga iri maminetsi makumi matatu pa 30 metres, kana mazuva maviri pamamita maviri mudziva, nezvimwe.
Dai ndaive Apple, ndaizoita zvakafanana. Pakazara, 80% yeavo vanoda kuti isapinda mvura imo nekuda kwedambudziko reziya mune zviitiko zvemuviri, uye kwete nekuti vanozvitora pasi pemvura ku15m.
AirPods, kunyatso tarisa Apple nyowani isina waya mahedhifoni